Home » Lahatsoratra farany farany » Entertainment » Firaisana ara-nofo maimaimpoana sy fitsangantsanganana an-tanàna
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Kolontsaina • Entertainment • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana • fiantsenana • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Andraso. Tokony hamaky firaisana maloto ao amin'ny fitsangantsanganana an-tanàna ve izany? Tsy mety ve izany amin'ny fitsipi-pitenenana? Marina izany, saingy mety ho diso fotsiny ireo fitsangatsanganana hotadiavintsika. Te hitsidika ny toerana misy ny firaisana ara-nofo sy ny tanàna izahay.
Iza no tsy mahatadidy ny efitranon'i Carrie miaraka amin'ny efi-tranony mahafinaritra?
Na ny fivarotana kiraro Manolo Blahniks nahasarika ny masony mihoatra ny indray mandeha raha nandeha sy niresaka izy. Tsarovy ilay tsipika malaza, “Salama, malala” raha tsy miresaka lehilahy izy?
Ary avy eo misy ny Distrikan'i Meatpacking izay i Samantha dia niditra tiff niaraka tamin'ny transvestites 3.
Ho an'ireo mpankafy mafy ny fandaharana amin'ny fahitalavitra "Firaisana ara-nofo sy Tanàna", dia be ny fahatsiarovana manerana an'i New York City izay nitrangan'ilay tantara miaraka amin'ireo mpilalao sarimihetsika Carrie, Samantha, Miranda, ary Charlotte. Manomboka amin'ny toerana tian'izy ireo hihaonana amin'ny sakafo sy fiaraha-mikorana, mankany amin'ny lalana mihazakazaka tian'i Charlotte ao amin'ny Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir, hatrany amin'ny bar an'i Steve izay nantsoiny araka ny alikany, hatrany amin'ny toerana be dia be nihaonan'izy ireo nisotro, NYC dia Sex and the City hotbed, tsy misy nokasaina.
Azo antoka fa afaka mandoa ny fitsidihana ara-nofo sy ny tanàna ianao - amin'ny bus ohatra, fa maninona raha mijery amin'ny fotoananao manokana miaraka amin'ireo tsara indrindra ao aminao fitsangatsanganana maimaim-poana?
Ireto ny sasany amin'ireo toerana malaza hita amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra izay mety te-hijanona hihinana, hisotro, na hijery-maso ianao.
Manolo Blahnik amin'ny 31 W 54th Street
Mandalo ny fivarotana kiraro an'i Manolo Blahnik i Carrie amin'ny fotoana maromaro mihoatra ny andiany fahitalavitra. Ny seho iray manokana indrindra dia rehefa tsapany fa nandany 40,000 XNUMX $ tamin'ny kiraro fotsiny izy - vola ilainy izao hividianana ny efitranony.
Tadidinao fa rehefa nianjera tamin'ny rano tao amin'ny trano fisakafoanana Central Park i Carrie sy Andriamatoa Big? Nisaraka izy ireo saingy nanapa-kevitra ny hihaona hisakafo atoandro mba haharaka. Rehefa avy nampitandrina azy i Miranda fa aleony tsy manoroka azy, rehefa nitodika tamin'izany fotsiny Andriamatoa Big, dia niverina nidina tany anaty rano i Carrie ary nitondra azy niaraka taminy.
Trano fisakafoanana Da Marino amin'ny làlana faha-220 W 49
Raha miresaka momba an'i Carrie sy Big sy ny trano fisakafoanana, ahoana ny momba an'i Da Marino rehefa tafaverina indray izy ireo ary rehefa misakafo hariva ao amin'ny Trano fisakafoanana italianina mahafinaritra sy mahafinaritra, izay fantatr'i Carrie fa mahazatra izy rehefa tonga ny tompony miarahaba azy ireo. Natahotra an'i Big izy avy eo rehefa nihira ny "When I Seventeen," ary Carrie saika nandraraka ny divainy.
Komikin'i St. Marka amin'ny 11 Street
Eny ary, andao hiala kely amin'i Carrie sy Big mandritra ny fotoana fohy ary hiverina any amin'ny magazain'i St. Mark's Comics. Teo no nihaonany tamin'i Wade - tovolahy iray tsy misy miraharaha an'izao tontolo izao (izay mbola mipetraka miaraka amin'ny ray aman-dreniny) ka gaga tamin'i Carrie rehefa avy niditra ny reniny rehefa samy nahatratra marijuana izy roa ary nomeny tsiny ny tsimparifary tamin'i Carrie. Mandeha miaraka aminy izy ary mitondra ny tsimparifary miaraka aminy ary mitondra any amin'ny sehatra mahatsikaiky iray hafa ao amin'ny efitranon'i Carrie rehefa zarainy amin'i Samantha, Charlotte, ary Miranda, ary rehefa nosamborina izy noho ny fifohana sigara azy imasom-bahoaka, dia nanambara tamim-pitiavana i Carrie fa ilay andro rehefa nosamborina izy noho ny fifohana sigara doobie.
Magnolia Bakery amin'ny 401 Bleecker Street
Mety tsy ho sehatra tsy hay hadinoina tamin'ny fizarana cupcakes an'i Carrie sy Miranda ity rehefa nifampiresaka momba ny fifandraisana izy ireo, saingy nanjary nalaza eran'izao tontolo izao ity mpanao mofo ity noho io sakafo kely nozaraina io. Ary ny tiako holazaina dia hoe iza no tsy mila antony hijanonana ao amin'ny trano fanaova-mofo hividianana sakafo?
Ny tratra mahafaly amin'ny 156 sy faha-7 Avenue S
Izay mitondra antsika amin'ny fitsaboana izay nitazona an'i Charlotte be loatra ka ny fidirana an-tsehatra tsy maintsy natao tamin'ny fizarana iray rehefa nakana ilay vibrator Rabbit-ny, izay novidiny tao amin'ity magazay kely mahafatifaty ity, mba hiverina amin'ny fiainana andavanandro hitany izy antony handaozana ny tranony indray.
Jefferson Market Garden anelanelan'ny faha-6 Avenue sy ny làlambe faha-10
Mandroso amin'ny zavatra ambony kokoa, ahoana ity zaridaina mahafinaritra misy an'ity izay manapa-kevitra hanambady i Miranda sy Steve? Tapa-kevitra ny hitady toerana "tsy mahaliana" izy, ary nanao izany rehefa vaky teo am-baravaran'ny zaridaina ny kitapony. Famantarana azo antoka fa hiteny isika fa io no toerana.
Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis ary Sarah Jessica Parker (Saripikan'i Bill Davila / FilmMagic)
Ny Hotely Plaza amin'ny 5th Avenue sy ny 59th Street
Raha ny marina, ny fitsangatsanganana rehetra any NYC dia tokony hampidirina farafahakeliny fitsangatsanganana ao amin'ny lobby ao amin'ny The Hotel Hotel, sa tsy izany? Ary eny, nisy seho iray koa teto, rehefa niresaka tamin'i Big i Carrie taorian'ny fety fampakaram-badiny tamin'i Natasha - izay nantsoiny hoe tsy misy fanahy ilay olona. Amin'ity sehatra ity dia mamerina sombin-tsarimihetsika amin'ilay sangan'asa "The Way We Were" izy, rehefa nanosotra ny volon'i Big tamin'ny rantsan-tànany izy ary nilaza hoe: "Mahafinaritra ny zazavavinao, Hubble."
Ary misy toerana maro hafa azo zahana - Ny Samovar Rosiana amin'ny làlana 256 W 52nd izay nandehanan'i Carrie tamin'ny daty voalohany niaraka tamin'ny "Rosiana", nolalaovan'i Mikhail Barishnykov, sy ny Loharano Faritra Columbus ao amin'ny làlambe faha-59 sy ny làlambe faha-8 izay vaky i Carrie Ny fon'i Aidan fanindroany ary ho tsara.
Avy eo dia misy ny Sampana Main Library an'ny New York City ao amin'ny 5th Avenue sy ny 42nd Street izay tokony hanambady an'i Carrie sy Big (teny manan-danja tokony hatao). Ary ilay trano izay ahitan'i Carrie sy Big ny trano NYC nofinofin'izy ireo izay tokony hisy azy ireo (misy ireo teny ireo indray) aorian'ny mariazy ao amin'ny 1010 Fifth Avenue. Tsia, miandrasa. Iray amin'ireo sarimihetsika izany aorian'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra. Saingy lisitra fitsangantsanganana iray hafa fitsidihana izany.
Hilton dia manokatra trano fandraisam-bahiny lehibe indrindra any Azia Pasifika
Sidina Belize avy any Seattle sy Los Angeles amin'ny Alaska...